Ma ugbu a maka Ọchịchịrị Ọchịchị nke Ọdịnaya B2B | Martech Zone
Dịka ụlọ ọrụ na-etinye akụrụngwa dị mkpa maka atụmatụ ọdịnaya dị irè, ọ na-esiri ụfọdụ oge mmefu siri ike ilo ebe ọ bụ na ọ chọrọ ịnweta ike na ikike na ụlọ ọrụ ha. Ha enweghị nhọrọ ọ bụla na mpụga ịzụta oke ọnụ site na mgbasa ozi na mmemme ọchụchọ akwụ ụgwọ. Na ichere abụghị naanị ihe ịma aka - ihe omuma a sitere na Scripted gosipụtara ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ ma na-enye ụfọdụ atụmatụ nchekwube iji merie ha.
Ka ahịa ọdịnaya na-aga n'ihu na-ewu ewu na ụlọ ọrụ ọ bụla, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya na uru ọ nwere ike iweta na tebụl. Ọ bụ eziokwu, ịre ahịa ọdịnaya bụ nnukwu ụzọ iji ruo ndị na-ege ntị ọhụụ, mepụta mmata ngwa ahịa, kụziere ndị na-azụ ahịa ihe na ọtụtụ ihe - mana ọ nwekwara ike bụrụ ihe na-emebi atụmatụ ahịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na emeghị ya n'ụzọ ziri ezi. Nicole Karlis, Ederede
Ọkara ndị ahịa niile enweghị ederede atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya na 62% chere na mbọ ha bụ adighi ike. N'ezie, 21% abụghị n'ezie e ji atụ ihe nloghachi na ntinye ego bu na uzo ato n’ime ihe edere emeputara. Ederede na-enye ụzọ 8 iji zere nsogbu ndị a - site na ịdepụta usoro ọdịnaya gị, ịmepụta kalenda ọdịnaya yana arụmọrụ na-agbanwe agbanwe, ịtọbe ebumnuche, nyochaa ndị na-ege gị ntị, na iweghachi ọdịnaya nke na-arụ ọrụ.
Lelee nkọwa niile na infographic a ma pịa-site na ịgafe na blọọgụ ederede ebe ha nwere ọtụtụ akụ maka ịkwalite gị atụmatụ ahia na mkpo!
Tags: b2bb2b ahia ahiab2b nsogbu ahia ahiaihe ịma aka nke ọdịnaya